Chibuku Super Cup 2019
Iqembu lenguqu eleHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku okwakuqala selokhu lumncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka 2014 ngemva kokutshaya elikwenze ele Ngezi Platinum Stars nge 1 ka nya ngeSonto.
Umgadli weqembu le Highlanders odla amahabula kulezinsuku uPrince Dube nguye ohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawa womabili njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe liqembu le Highlanders kumncintiswano walonyaka owenkezo ye Chibuku.
UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili elesizini, lapho aqale khona ukulitshayela emambuleni phose nsukuzonke, okumenze acine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka.
Lumgadli utshele intathelizindaba zemidlalo ukuba isicoco se Chibuku ngesabalandeli baleliqembu bona abayale belokhu belisekela lalapho ebelingadlali kuhle khona.
“Ngijabulile kakhulu njalo leyi yinto ebesiyifuna kakhulu njengemuli ye Highlanders. Inkezo leyi mina ngokubona kwami ngeyabalandeli beqembu le Highlanders bona abame lathi kusukela emdlalweni wakuqala kuze kufike lamhlanje.
Ngithanda njalo lokubonga abanye abadlali bona abangincedise ukuba ngidlale ngendlela engidlale ngayo,” kutsho uDube.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala ku final eyomncintiswano walonyaka iqembu le Highlanders linqobe ele Dynamos nge 1 ka nya kusigaba sakuqala esomncintiswano kuthi kusigaba se quarter – final litshaye ele FC Platinum nge 3 ka nya ikanti kusigaba se semi – final iqembu le Bosso litshaye ele ZPC Kariba nge 1 ka nya.
Isiphathamandla seqembu le Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo yinhlawulo kubalandeli beqembu le Bosso bona asebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
“Lokhu sekutshengisa ukuba sesifike ezingeni elokuthi isihlahla esasihlanyelayo sesiqalile ukuthela izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu labalandeli beqembu ngoba ungalandela ingwalo ze PSL zitshengisa ukuba iqembu le Highlanders yilo elilabalandeli abanengi kakhulu elizweni abangena enkundleni besiyabukela ibhola,” kutsho uDube.
Ukuphakamisa isicoco kuza lethuba elokuphatheka kumncintiswano we CAF Confederation Cup kodwa umfoka Bahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolodaba.
Ukuphatheka kumncintiswano eyokudinga intshantshu zezwekazi lase Africa yikho okwenza iqembu le Highlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho okulemali ethe xaxa khona.
Phezu kokuthola ilungelo elokuyamela ilizwe le Zimbabwe kuzwekazi lase Africa, iqembu le Highlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi amabili lanhlanu ($225 000).
Udaba lomdlalo weCibuku Final siluphiwa nguJoseph Njanji